Global Voices teny Malagasy » Japana: Misedra olana ny tolona Sumo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 10 Oktobra 2018 6:32 GMT 1	 · Mpanoratra Jens Wilkinson Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
Volana vitsivitsy henjana teo amin'ny tontolon'ny tolona sumo, “fanatanjahatena nasionaly” Japoney. Voalohany, niverina tao amin'ny tanindrazany ilay mpitolona Mongoliana, Asashoryu,  iray amin'ny yokozuna  (kilasy ambony indrindra amin'ny tolona) mba ho tsaboina noho ny fikorontanana ara-tsaina vokatry ny fanakianana fa tsy nahavita ny adidiny izy, mody milaza fa marary, ary avy eo niverina tany Mongolia, izay nakàna horonantsary azy teo am-pilalaovany baolina . Nilaza ny sasany tamin'ny fampahalalam-baovao hoe simban'ny firohotry ny “mpitolona vahiny” sy ny “fanatanjahantena nentim-paharazany ao Japana” ny “fanatanjahantenam-pirenena Japoney”.
Na izany aza, nihanitombo ny olana raha vao fantatra fa tamin'ny volana jona, namoy ny ainy teo am-panaovana fanazaran-tena ilay mpitolona 17 taona antsoina hoe Tadashi Saito (Tokitaizan no anaran-tsehatrany), izay vao avy niditra teo amin'ny tontolo sarotran'ny Sumo. Tamin'ny voalohany, dia nilaza ny mpanazatra azy, Tokitsukaze fa noho ny faharerahana no anton'ny fahafatesany, saingy hita ankehitriny fa “niharan'ny herisetra” ho faty i Tokitaizan, ary noroahin'ny federasionan'ny Sumo ilay mpanazatra nanomboka teo.
Betsaka ireo bilaogera niresaka ny fikarakarana natao azy, anisan'izany izy voadaroky ny tavoahangin-dabiera. Ohatra amin'izany ny bilaogera  niteny hoe:
Noterena hanome toky izy hoe: ” Tsy hitsoaka intsony aho, hiezaka hanao izay vitako” ary nopotehin'izy ireo nizara roa ny findainy mba tsy ahafahany miantso ireo Ray aman-dreniny. Mampatahotra izany. Misy olona tena mahavita izany ve?
Bilaogera Matimulog naneho ny fihetseham-po miely patrana momba ny fahadisoam-panantenana  naterak'izany tranga mampalahelo izany mba hanazavana ny olan'ny herisetra amin'ny sumo.
Tahaka izany ny zava-misy fa toa zava-mitranga isan'andro ny daroka, ary toa mahafaty mihitsy ka lasa olana, hatramin'ny ninoan'ny olona fa raha tsy misy herisetra, dia tsy ho matanjaka mihitsy ny tanora mpitolona. Tokony ho hita toy ny henatra ho an'i Japan izany, fa tsy henatra ho an'ny fanatanjahan-tena nasionaly Japoney (ihany).
Lohahevitra iray mahaliana ny andraikitry ny Federasiona Sumo. Araka ny nosoratan'ilay  bilaogera Shosan no Blog hoe :
Taorian'ny fahafatesan'i Saito avy hatrany, dia nangataka fanazavana tamin'ny mpanazatra ny federasiona Sumo, saingy nanadihady azy indray taorian'ny fangatahan'ny Minisiteran'ny fampianarana sy ny kolontsaina, rehefa niaiky tamin'ny prefekioran'ny polisy ao Aichi i Tokitsukaze fa nisy ny herisetra. Toa nanome fanazavana hafa izy tamin'ny famotorana voalohany.
Farany, raha nanome tsiny mafy an'i Tokitsukaze, bilaogera Igajin no Tensei Jingo kosa miresaka momba ny ho avy manjavozavo eo amin'ny sumo .
Na amin'izao fotoana izao aza, mihavitsy haingana ny isan'ny lehilahy tanora manantena hiditra hanao sumo. Raha tsy voaraoka teo amin'ny tontolon'ny sumo, netim-paharazana Japoney i Tokitsukaze, dia mety ho simba ny fanatanjahantena.
Iza no hahafantatra izay ihafaran'ny tontolon'ny sumo?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/10/127387/
 yokozuna : http://en.wikipedia.org/wiki/Makuuchi#Yokozuna
 am-pilalaovany baolina: http://jp.youtube.com/watch?v=aSCn2NhIDvM
 ho avy manjavozavo eo amin'ny sumo: http://blog.so-net.ne.jp/igajin/2007-09-30